U-Eric S. Raymond, ongomunye wabasunguli be-Open Source Initiative, unqatshelwe ukufinyelela kuhlu lwamakheli | Kusuka kuLinux
U-Eric S. Raymond, ongomunye wabasunguli be-Open Source Initiative, unqatshelwe ukufinyelela kuhlu lwama-imeyili
U-Eric S. Raymond, omunye wabasunguli be-Open Source Initiative, obehamba phambili kwinhlangano evulekile yesoftware uthe unqatshelwe ukufinyelela ezinhlwini zokuposa zenhlangano ngoba ngazama ukumelana nokubuyekezwa kwenqubo 5 no-6.
Lezi zindlelaahlobene nokuvinjelwa kokubandlululwa, futhi wagxeka imizamo yokubeka umkhawulo ekuziphatheni okungalungile ezingeni lamalayisense futhi ubeke imibono yobulungiswa bezenhlalo. Sekuyizinyanga ezimbalwa manje, i-Open Source Initiative ibidingida imizamo yokunika amandla i-CAL (License for Cryptographic Autonomy) iphakathi kwamalayisense avulekile avunyelwe.
NgoJanuwari UBruce Perens, owathi, kanye no-Eric Raymond, bathuthukisa incazelo yoMthombo Ovulekile futhi benza i-Open Source Initiative ishiye inhlangano ngenxa yokungezwani kweCAL mayelana ne-OSI.
I-CAL (Ilayisense ye-Cryptographic Autonomy) kungokwesigaba selayisensi ye-copyleft futhi yathuthukiswa ngesicelo sephrojekthi yeHolochain ikakhulukazi ukuvikelwa okungeziwe kwemininingwane yomsebenzisi kuzicelo ze-P2P ezisatshalalisiwe.
IHolochain ithuthukisa ipulatifomu esekwe ku-hashchain yokwakha izinhlelo zokusebenza ezisatshalaliswe eziqinisekisiwe, futhi ngelayisense entsha izama ukuqinisekisa ukuthi noma yiluphi uhlelo lokusebenza olususelwa eHolochain lunokwethenjelwa futhi luzimele.
Ngaphezu kwesidingo sokusabalalisa yonke imisebenzi etholakele ngaphansi kwezimo ezifanayo, ilayisense linikeza ilungelo lokusebenza komphakathi (ukusebenza komphakathi) kuphela ngenkathi kugcinwa okuyimfihlo nokuzimela kokhiye be-cryptographic abazimele bomsebenzisi ngamunye.
Ngokomqondo, I-CAL ayifani namanye amalayisense, ngoba ayihlanganisi ikhodi kuphela, kepha futhi nedatha esetshenzisiwe.
Ngokusho kweCAL, uma kuphulwa imfihlo yephasiwedi yomsebenzisi (ngokwesibonelo, okhiye bagcinwa kuseva eyodwa), amalungelo obunikazi bedatha nawo aphuliwe futhi ukulawula idatha yabo kuyalahleka amakhophi wesicelo.
Ngokusho kukaRaymond, i-Open Source Initiative ifinyelele ezingeni lezokuphatha ehambisana nomthetho wenqubomgomo wesithathu ohlongozwe ngumlobi uRobert Conquest:
"Ukuziphatha kwanoma iyiphi inhlangano ephethe kahle kuqondakala kahle ngokucabanga ukuthi ilawulwa uzungu oluyimfihlo lwezitha zayo." URaymond wasuswa ohlwini lwamakheli ngoba wayephikelela kakhulu ekuphikiseni ukutolika okuhlukile kwemigomo eyisisekelo evimbela ilayisense ekwephuleni amalungelo amaqembu athile nokubandlululwa emkhakheni wokufaka isicelo.
Ngokusho kukaRaymond, okwamanje kwenziwa umzamo wokubuyekeza izisekelo zamasiko isoftware yomthombo ovulekile.
Umphumela wezenzo ezinjalo ukwehla kwesithunzi nokuzimela kwabantu abasebenza futhi babhale ikhodi, bexhasa abazibiza ngabanakekeli bemikhuba emihle (amaphoyisa aphikisayo, gxila endleleni izimpikiswano ezethulwa ngayo, hhayi izimpikiswano uqobo).
Mayelana nemikhawulo Izimiso Zokuhle Ekulayisenseni Nombono Ohlukile emaphuzwini 5 no-6 ukunquma ilayisense evulekile, amaphrojekthi amaningi ngokwengeziwe asanda kuveza ukungeneliseki ngeqiniso lokuthi abahlinzeki bamafu bakha imikhiqizo yokuthengisa ethathwe kokunye futhi bathengise kabusha izinhlaka ezivulekile kanye ne-DBMS ngendlela yezinsizakalo zefu, kepha ababambi iqhaza empilweni yomphakathi futhi abasizi entuthukweni.
Umphumela ukwethulwa kwamalayisense abeka umkhawulo kububanzi bokusetshenziswa. Amalayisense afanayo amukelwe eminyakeni yamuva kumaphrojekthi afana ne-ElasticSearch, Redis, MongoDB, Timescale, neCockroachDB.
Isibonelo singaba yi-CAL, esiseduze nokuthathwa njengenhlangano ye-OSI vula. Kule layisense, ukwethulwa kwemikhawulo emisha kungenxa yesifiso sokuvimbela izinkampani ekulawuleni idatha yomsebenzisi futhi kudinga ukuthi abathuthukisi bezinhlelo zokusebenza bagcine okhiye bokubethela kuphela kumasistimu abasebenzisi bokugcina.
Izidingo ezishiwo zingabhekwa njengokubandlululwa yabathuthukisi bohlelo lokusebenza abagcina okhiye kuseva emaphakathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » U-Eric S. Raymond, ongomunye wabasunguli be-Open Source Initiative, unqatshelwe ukufinyelela kuhlu lwama-imeyili
I-FreeNAS ne-TrueNAS ziyahlangana futhi manje zakha i- "TrueNAS Open Storage"